Midangana ny vidin-javatra: tafakatra 2 800 Ar ny kilaon’ny vary makalioka | NewsMada
Midangana ny vidin-javatra: tafakatra 2 800 Ar ny kilaon’ny vary makalioka
Manomboka miditra amin’ny maitsoahitra isika. Tsy misy intsony latsaky ny 2 000 Ar ny vidin’ny kilaon’ny vary eto amintsika.
Nisondrotra ny vidim-bary nanomboka ny herinandro lasa teo. Raha ny eny amin’ny manodidina an’Itaosy, efa tafakatra 650 Ar hatramin’ny 800 Ar ny kapoakan’ny vary makalioka, izany hoe, tafakatra 2 300 Ar ny hatramin’ny 2 800 Ar ny iray kilao, raha 1 900 Ar hatramin’ny 2 100 Ar ny tany aloha. Eto an-dRenivohitra, manodidina 2 300 Ar hatramin’ny 2 400 Ar ny iray kilao amin’ny makalioka, raha 2 200 Ar hatramin’ny 2 400 Ar ny vary gasy mena raha 1 800 Ar hatramin’ny 2 000 Ar ny tany aloha.
Mahatratra 2 100 Ar kosa ny kilaon’ny vary hafarana avy any ivelany (stock) raha 1 800 Ar tany aloha.
Miditra amin’ny maitsoahitra isika izao, mihena ny famatsiana sakafo ary tsy maintsy hitohy hiakatra ny vidiny.
Tsotra ny tenin’ny mpaninjara, nisondrotra ny vidiny hakan’izy ireo ny vary any amin’ny mpamongady. Vidiana 110 000 Ar ny iray gony 50 kilao (2 200 Ar/kg) amin’ny vary makalioka, ary 100 000 Ar hatramin’ny 110 000 Ar ny vary gasy. Manodidina ny 100 Ar isaky ny kilao ny tombombarotra alain’izy ireo.
Ahina hiakatra koa ny sakafo ilaina andavanandro hafa, indrindra izay hafarana avy any ivelany ny ankamaroany, nefa tsy maintsy vidiana amin’ny vola vahiny. Nisanda 4 559 Ar ny 1 euro, omaly, ary efa tafakatra 4 661 Ar ny 27 oktobra 2020 teo. Vidiana 3 846 Ar kosa ny 1 dolara, omaly, raha efa 3 951 Ar ny 28 oktobra 2020 teo.